Fanamboarana PC anatiny hahazoana fidirana ivelany | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 7, 2008 Zoma Janoary 11, 2013 Douglas Karr
Miaraka amin'ny fananganana ny firewall sy ny router, lasa fanamby lehibe ny fifandraisana amin'ny solosaina hafa amin'ny alàlan'ny Internet. Raha te hikirakira ny solo-sainanao ianao ahafahan'ny fidirana ivelany dia misy ny fanovana fanovana lalina tokony hataonao ao amin'ny tambajotrao.
Raiso ny adiresy IP anao na ny adiresy DynDns
Ny dingana voalohany hahitana anao dia ny fahazoana ny adiresinao. Ao amin'ny tontolon'ny Internet, fantatra amin'ny anarana hoe Adiresy IP izy io ary azo zahana mora foana.
Fantaro raha manana adiresy IP Static (tsy miova) na adiresy IP Dynamic (miova). Ny mety dia raha DSL ianao na DSL Pro aza dia manana adiresy IP mavitrika ianao. Raha ao amin'ny Business DSL na Cable Modem ianao dia azo antoka fa mijanona.
Ity ny adiresy IP voatendry eo amin'ny fidirana amin'ny tambajotrao. Raha mijanona ianao dia tsy misy ahiahy. Raha Dynamic ianao dia misorata anarana ho an'ny serivisy toa DNS Dynamic. Ny ankamaroan'ny mpandeha maoderina dia manana fahaizana mifandray amin'i DynDNS hitazonana ny adiresy IP anao havaozina. Avy eo, fa tsy manome olona manana adiresy IP anao, dia hanome azy ireo sehatra toy ny findme.homeip.net.
Raha tsy fantatrao ny adiresy IP ivelany, dia afaka mampiasa tranokala toa Inona no adiresy IP ho hitako.
Ping ny DynDns na ny adiresy IP anao ary jereo raha mahazo valiny ianao (Sokafy ny "Command Prompt" na "Terminal" ary mihazakazaha: ping findme.homeip.net
Raha tsy mahazo valiny ianao dia mety mila mamela Pinging ao anaty fikirakira ny router anao. Jereo ny antontan-taratasin'ny router anao.
Alefaso ny PORT Forwarding ao amin'ny Router anao
Ankehitriny manana ny adiresinao izahay dia zava-dehibe ny hahafantarana izany varavarana hiditra ny an-trano amin'ny alalan'ny. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe PORT amin'ny solosaina. Ny rindranasa samihafa dia mampiasa PORT isan-karazany, noho izany dia zava-dehibe ny fananantsika ny PORT tsara nosokafana sy naterina tamin'ny solo-sainanao. Amin'ny alàlan'ny default, ny ankamaroan'ny router dia nakatona ny seranan-tsambo rehetra mba tsy hisy hiditra ao amin'ny tamba-jotrao.
Mba hahafahan'ny PC loharano mifandray amin'ny PC misy anao, ny Router anao dia mila mitarika ny fifamoivoizana mankany amin'ny PC-nao.
Niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny adiresy IP Static ho an'ny tamba-jotra ianao, izao dia zava-dehibe ny fanananao adiresy IP statika ho an'ny solosainao amin'ny tambajotra anatiny. Jereo ny antontan-taratasinao Router momba ny fomba handefasana adiresy IP statika ho an'ny PC Anatinao.
Miankina amin'ny karazana rindranasa tianao ampifandraisina, tsy maintsy ampitainao ny fandefasana PORT avy amin'ny Router mankany amin'ny adiresy IP static an'ny PC anao.
HTTP - raha te handefa mpizara tranonkala amin'ny PC-nao ao anatiny ianao ary hanao azy io ho azo alefa ivelany, dia tokony halefa ny PORT 80.
PCAnywhere - 5631 sy 5632 dia mila alefa.
VNC - 5900 dia mila ampitaina (na raha efa nanamboatra seranan-tsambo hafa ianao dia ampiasao izany).
Alefaso ny fikirakirana Firewall amin'ny PC-nao
Ireo PORTS ihany izay nampitanao ny PC dia mitaky fampandehanana ao anaty rindrambaiko Firewall an'ny PC. Jereo ny firaketana ny firewall anao sy ny fomba ahafahana mampihatra ilay rindranasa sy / na seranan-tsambo tadiavinao idirana ivelany.
Ny fanovana ireo fanovana fanovana ireo dia tsy mora, fa raha vao mandeha tsara daholo dia tokony afaka miditra amin'ny PC amin'ny alàlan'ny fampiharana ny safidinao na aiza na aiza tianao.
FANAMARIHANA: Na inona na inona programa ampiasainao, aza hadino ny mampiditra solonanarana sy tenimiafina sarotra be! Tian'ireo mpijirika ny mikaroka tambajotra mitady seranan-tsambo misokatra hijerena raha afaka miditra sy / na mibaiko an'ireo PC ireo izy ireo. Ho fanampin'izany, azonao atao koa ny mametra ny adiresy IP izay homenao fidirana.
Tags: fidiranaFirewallipny router
Novaina ny Domaintechblog.com